ကိုသန်းလွင် ● ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်း - MoeMaKa Media
Home / Currents / International / Ko Than Lwin / ကိုသန်းလွင် ● ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်း
ကိုသန်းလွင် ● ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်း
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၉
ဥရောပကောင်စီအနေဖြင့် မိမိတို့၏အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများတွင် ဒီမိုကရေစီအရေးကို ဦးစားပေးရှေ့တန်းတင်လိုစေကြ ပါသည်။ ဗြိတိန် ကဲ့သို့သော ဒီမိုကရေစီအခြေကျနေပြီးသား နိုင်ငံအတွက် ဘယ်သော အခါမှစိုးရိမ်ခဲ့ရသည်ဟု မရှိခဲ့ဘူးပါ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် (Mr. Boris Johnson) က ယခုအခါ ပါလီမန်ကိုစက်တင်ဘာ လ ၉ ရက်မှ အစပြု၍ ၅ ပါတ်မျှအနားပေးရန် စီစဉ်လိုက်သောအခါ ဥရောပကောင်စီမှ ခေါင်းဆောင်များသည် လည်းဘာမျှမတက်နိုင် စိတ်ပျက်လက် ပျက်သာ ကြည့်နေရပါတော့သည်။
မစ္စတာဂျွန်ဆင်၏ ပါလီမန်ကိုဖျက်သိမ်းရန် လုပ်ရပ်မှာ သူ၏ ပါလီမန်ကိုသာမက မိမိနိုင်ငံ၏ဘေးမှ စောင့်ကြည့် နေကြသော မိတ်ဆွေနိုင်ငံများကိုလည်း အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါသည်။ ဂျွန်ဆင်အနေဖြင့် ဗြိတိန် ကိုဥရောပယူနီယံ မှထွက်ခွာရေး (Brexit) အတွက် မည်မျှအလေးထားကြောင်း ပြသလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဥရောပကောင်စီအနေဖြင့် ဟန်ဂေရီနှင့် ပိုလန်နိုင်ငံတို့တွင်ဒီမိုကရေစီမကျသော လုပ်ရက်များအတွက်စိတ်ပျက် နေရချိန် တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံက ဤသို့ပြုမှုလိုက်ခြင်းအတွက် မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်ကြရပါသည်။ မြို့တော် ဘရပ်ဆဲလ် (Brussels) နှင့် ဥရောပကောင်စီ တစ်ခုလုံးသည် တခါတရံ ဒီမိုကရေစီမကျသော လုပ်နည်းလုပ်ငန်းများကို တွေ့နေကြရာ ယခုအခါ လန်ဒန် ကပါ ဤသို့လုပ်လိုက်သဖြင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ပါတ်သက်၍ များစွာအကြပ်ရိုက် နေကြပါပြီဟု ဘရပ်ဆဲလ်သုတေသနမှ မစ္စတာ ဝုဖ် (Mr.Grahan Wolf) က ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။
အကယ်စဉ်စစ် မစ္စတာဂျွန်ဆင်သည် သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ ဥရောပကောင်စီမှ ထွက်ခွာသွားလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အသင့် အတင့်မျှတမှုရှိသော သဘောတူညီချက်တခုကိုသာ ပါလီမန်က အတည်ပြုပေးစေချင်သည်။ သို့မဟုတ် အောက်တို ဘာ ၃၁ ရက်တွင်မူ သဘောတူညီချက်ရှိရှိ၊ မရှိရှိ၊ ဥရောပ ယူနီယံမှ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်စင်စစ် သူ၏ ဥရောပယူနီယံမှ ထွက်ခွာခြင်းကိစ္စများတွင် ညှိနှိုင်းသူ မစ္စတာဒေးဗစ်ဖရော့ (Mr David Frost) ကို ဆွေးနွေးမှုများကို အပြင်းအထန်လုပ်နေခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ ဗြိတိန်ထွက်ခွာပြီးလျှင် မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံ အိုင်ယာလန်နှင့် အိုင်ယာလန် သမ္မတနိုင်ငံ (Ireland Republic) တို့အကြား နယ်ခြားမျဉ်းသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ကြေလည် စေရန် ဆောင်ရွက်ရန်လိုသည်။ အကယ်၍ နယ်နိမိတ်မရှိခဲ့ပါက အိုင်ယာလန်သဘောတူညီမူကို ထိခိုက်ဖွယ်ရှိနေသည်။ ယခုလက်ရှိအနေအထားမှာ ဥရောပ ကပ်စတန်ယူနီယံအနေ ဖြင့်ဘော်ဒါမရှိ ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ဥဒဟိုဖြတ်သန်းနေသည်။
ဂျာမနီ ချန်ဆဲလာ အင်ဂျလာမာကယ်ကဲ့သို့သော ခေါင်းဆောင်များက နယ်နိမိတ်ကို လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက် ရန်ကိစ္စကိုြ ပီးစီး သွားစေလိုသည်။ သို့သော်တကယ်တမ်းထိုပြဿနာများမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနိုင်သည်။ ထိုအတောအတွင်း လန်ဒန်နှင့် ဘရပ်ဆဲလ်တို့အတွင်း သဘောတူညီမှုမရရှိဘဲ ထွက်ခွာသွားရေးအတွက် များစွာခရီးရောက်နေပြီ၊ ထွက်ခွာခြင်း မှဖြစ်ပေါ်လာမည့် (Shock Wave) များကို ဒဏ်ခံနိုင်ရန်အသင့်ရှိနေပြီ ဆိုသောသက်များလည်းထွက်ပေါ်နေ သည်။ ရုတ်တရက်ထွက်ခွာမှုကြောင့် ဘက်လုံးတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စ များတွင်အနှောင့်အယှက်များတွေ့ရနိုင်ပြီး ဗြိတိန်အဖို့ နစ်နာပါသည်။
အောက်တိုဘာလလယ်ပိုင်းတွင် ဥရောပကောင်စီ စည်းဝေးပွဲရှိရာ ထိုအချိန်တွင် မစ္စတာဂျွန်ဆင်၌ ဘော်ဒါဆိုင်ရာ သဘော တူညီမှု တစ်ခုခုရရှိပြီး ဖြစ်ရပေမည်။ သူ့အရင်ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဇာမေလက်ထက်က ဥရောပ ယူနီယံနှင့် သဘောတူညီချက် ၃ကြိမ်ရရှိခဲ့ရာ သုံးကြိမ်စလုံး ပါလီမန်ကပယ်ချခဲ့သည်။
ဥရောပကောင်စီအတွက်မှု သူ၏အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များကသာ ဗြိတိန်နှင့်သဘောတူစာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းပြုနိုင်ကြပြီးနောက် ရေရှည် ဆက်ဆံရေးနှင့် ပါတ်သတ်၍လည်း ၎င်းတို့ကသာ သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည် ရေးနိုင်ကြသည်။
ယနေ့လက်ရှိအခြေအနေများအရ လာမည့်နှစ်လအတွင်းအောက်ပါအတိုင်း ခြောက်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။
(၁) ပါလီမန်မှ တာဝန်ယူခြင်း
ပါလီမန်အမတ်များသည် ယေဘူလျအားဖြင့် ဗြိတိန်ကောင်စီမှထွက်ခြင်းကို သဘောမတူကြပါ။ အထူးသဖြင့်သ ဘောတူညီမှုမရှိဘဲ စာချုပ်မှအပြီးအပိုင် မထွက်ခွာလိုကြပါ။ ဂျွန်ဆင်အနေဖြင့် ပါလီမန်ကို ၅ ပါတ်မျှ ဖျက်သိမ်း ခြင်းသည် ပြဿနာကို ခက်ခဲအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း ထိုသို့ လုပ်ခြင်းကြောင့် ပါလီမန်ကို (Galvanize) ပို၍ညီညွှတ်စေသည်။ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင် ဆွင်ဆန် (Jo Swinson) က “ပါလီမန်က လျှို့ဝှက်သောလုပ်ငန်း (Arcane) တွေလုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်” ဟု ဆိုသည်။ ဘာအလုပ်များဆို သည်ကိုပြောဆိုခြင်းမရှိ။
(၂) ပါလီမန်မှ နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်စရာကို လုပ်ခြင်း
နောက်ဆုံးပါလီမန်မှလုပ်စရာကုန်သွားလျှင် အစိုးရကို အယုံအကြည်မရှိကြောင်း အဆိုကို တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်အစိုးရကို ပြုတ်ကျသွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ယခုအချိန်ထိတော့ ဤသို့လုပ် ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံမရပါ။ သူတို့ဤသို့လုပ်လျှင်လည်း ပြဿနာသည် ဖြေရှင်းသွားမည် မဟုတ်ပါ။
ဥပဒေအရ ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ကို နှစ်ပါတ်အတွင်း ရွေးချယ်ရန်ရှိသည်။ သို့မဟုတ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရမည်။ သို့မဟုတ် ယာယီအစိုးရဖွဲ့ပြီး ၎င်းက ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ထွက်ခွာရန်ရက်ကို နှောင့်နှေးပေးပါ ရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ပြဿနာမှာ အတိုက်အခံလေဘာခေါင်းဆောင် ကိုဘင် (Jaremy Corbyn) မှာတစ် သက်လုံး ဗြိတိသျှကောင်စီကို ဝေဖန်လာခဲ့ပြီး လက်ဝဲယိမ်းလွန်းသည်ဟု ယူဆကြသည်။ အခြားခေါင်း ဆောင် များရှိသော်လည်း မစ္စတာ ကိုဘင် ကနေရာဖယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အယုံအကြည်မရှိကြောင်း အဆိုမှာ ၎င်း၏ အကူအညီမပါဘဲ တင်သွင်း၍မရပါ။
ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်တွင် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပေးရန် ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိပြန်သည်။ သူ၏လက်ထောက်များက ဤ အကြောင်းကို အထပ်ထပ်ပြောနေကြသည်။ ငြင်းပယ်ပြီးလျင် နိုဝင်ဘာလတွင် အထွေ ထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးရန် လိုသည်။ ထိုအချိန်မတိုင်မီ ယူနီယံမှထွက်ခွာပေးရပေမည်။ ဒဏ်ရာများစွာကျန်ရစ်မည်ဆိုသော် လည်း မဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါချေ။
ပါလီမန်က ဥပဒေကိုလျင်မြန်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်၍၎င်းတို့ကို (Suspend) မလုပ်မီ သဘောတူညီမှုမရှိဘဲ ယူနီယံမှ မထွက်ခွာရ (No deal Brexit) ဆိုသည်ကို ဥပဒေပြုနိုင်သည်။ ဂျွန်ဆင်က ၎င်းတို့ကို သာလွန်ပြီး (Snap election) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ခေါ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်အလွန်များပြီး အထူးသဖြင့်ထောက် ခံသူအနေဖြင့် ပါလီမန်တွင် (Working Majority) အနေဖြင့် အမတ်နေရာ တစ်နေရာသာရှိရာ ဂျွန်ဆင်အဖို့ ဧရာမစွန့်စားပွဲကြီးဖြစ်နေသည်။ ဂျွန်ဆင်အနေဖြင့် ပြည်သူများဘက်က ရပ်တည်ပေးပြီး ဗြိတိန်ကောင်စီမှ မထွက်ချင်သည့် ပါလီမန်ကို တိုက်ဖျက်သည့် ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရွေး ကောက်ပွဲကို အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်တွင် ကျင်းပပြီး အနိုင်ရခဲ့ပါက ယူနီယံသို့ တာဝန် ( Mendate) အသစ်ဖြင့် သွားရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
သို့ပါသော်လည်း အခက်အခဲက ရှိနေပြန်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲခေါ်ရန်အတွက် ပါလီမန်၏ ၂/၃ သောမဲများကို ရရမည်ဖြစ်၏။ အတိုက်အခံတို့၏ မဲများလည်းလိုသည်။ အတိုက်အခံတို့ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲတော့ လုပ် ချင်ပါ၏။ သို့သော်လည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးမဲထည့်ဖို့တော့ စဉ်းစားရဦးမည်။ မစ္စတာဂျွန်ဆင်ကလည်း ယူနီယံ မှထွက်ခွာရန်အထိ ဆွဲထားလိုပေလိမ့်မည်။
(၄) သဘောတူညီချက်ဖြင့် ယူနီယံမှ ထွက်ခွာခြင်း
မည်သူမျှတော့ ဤသို့ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်ပါ။ ပါလီမန်က ၃ကြိမ်တိုင်တိုင် ထရီဇာမေလက်ထက်က ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယူနီယံကလည်း ထပ်မံ ညှိနှိုင်းရန် ငြင်းပယ်နေသည်။ တစ်ခုရှိသည်မှာ အောက်တိုဘာ ၁၇/၁၈တွင် ယူနီယံခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဘို့ရှိရာ ၎င်းမှ အဖြေတစ်ခုခုထွက်လာနိုင်သည်။ ဂျွန်ဆင် အနေ ဖြင့်ယူနီယံခေါင်းဆောင်များ၊ ပါလီမန်အမတ်များခေါ်၍ အကြပ်ကိုင်ကာ သဘောတူနိုင်မည့် နည်းတစ်နည်းကို ပြ၍ယူနီယံမှထွက်ခွါနိုင်သည်။ အကြောင်းမူ တစ်ဖက်က သဘောတူညီချက်မရဘဲ ထွက်ခွာရမလို ဖြစ်နေသော ကြောင့်ပင်။
(၅) ဘဘောတူညီချက်မရှိဘဲ ထွက်ခွာခြင်း
ဂျွန်ဆင်က သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ ထွက်ခွာရေးကိုစိုင်းပြင်း ဆောင်ရွက်နေသလို တကယ်လည်းထွက်ခွာချင် နေဟန်တူသည်။ ဥရောပကောင်စီမှ မလျော့ပါက ပါလီမန်၏အချိန်ကန့်သတ်ချက်များအရ သဘောတူညီမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ထွက်ခွာသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းဖြင့် ဂျွန်ဆင်က မိမိနှင့် နောက်လိုက်များကို ၂၀၁၉ /၂၀၂၀ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ထိ စည်းရုံးထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပြောစရာတစ်ခု ရှိသည်မှာ သဘောတူညီချက်မရဘဲ ထွက်ခွာမှုကြောင့် စီးပွားရေးအရ တစ်စုံတစ်ခုအကြီး အကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါက ရွေးကောက်ပွဲတွင် မနိုင်နိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။
(၆) တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ခြင်း
ယူနီယံမှထွက်ခွာရန် စကားစတင်ပြောချိန်က မီလာ (Ms Gina Miller) ဆိုသူ မထွက်ခွာရေး ဆော်သြသူက ထိုစဉ်ကဝန်ကြီးချုပ်မစ္စစ်မေ၏ ပါလီမန်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ (By pass) ကျော်ဖြတ်ရန် အစီအစဉ်ကို တရားရုံးတော် မှ ကန့်ကွက်ခဲ့ဖူးသည်။ သူက ယခုလည်း ထပ်မံ၍ ရုံးတော်မှ ဂျွန်ဆင်၏လုပ်ရပ် ကန့်ကွက်ပါ လိမ့်မည်။ ယခင် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဂျွန်မေဂျာကလည်း တတ်နိုင်သမျှကူညီမည်ဟု ကမ်းလှမ်းသည်။
တရားရုံးက ပါလီမန်အမတ် ၇၅ ဦး က တင်သွင်းသော ဂျွန်ဆင်၏ လုပ်ရပ်ကို တားမြစ်ပေးရန် အဆိုပြုချက်ကို ပယ်ချသည်။ သူက ဤအမူနှင့် ပါတ်သတ်၍ လိုအပ်သော အချက်အလက်များကိုကြားနာရန် နောက်အပတ် ကိုရက်ချိန်းပေးသည်။
ဂျွန်ဆင်အနေဖြင့် အယုံအကြည်မရှိအဆိုကို ရှုံးနိမ့်သည့်တိုင် ရာထူးမှထွက်မပေးဘဲနေနိုင်သည်။ ထိုအခါ တရားရုံး သို့ရောက်ကြရဦးမည်။ ထိုအခါ ပါလီမန်ထဲသို့ ဥပဒေပြုရန်ရောက်ရှိနေသူများကမဆုံးဖြတ်ရဘဲ တရား သူကြီးများက ဆုံးဖြတ်သည်ကို နာခံကြရပေလိမ့်မည်။
Ref: What’s Next for Brexit? Six Possible Outcome. By Stephen Castle New York Times Aug 30 2019
ကိုသန်းလွင် ● ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်း Reviewed by Aung Htet on 2:24 PM Rating: 5